Joornaalada - Bogga 4 - Geofumadas
Farxad weyn baynu nahay inaan helno warka ah in Tilmaamaha Magazine uu bilaabay luqadda Isbaanishka ee Directionsmag.es laga bilaabo Febraayo 2. Shaki la'aan, tani waxay ka dhigan tahay tallaabo muhiim ah iyo aqoonsiga heerka koritaanka ee aagga geospatial uu ku yeeshay adduunka Isbaanishka-akhriska. Qaar ka mid ah waxyaabaha ku jira tarjumaadaha nooca ...
Daabacaaddii siddeedaad ee majaladda Geoinformatics hadda waa la heli karaa, taas oo ku taagan habka loo yaqaan 'GIS' oo si fudud "heer sare ah" heer geofumed ah, in kasta oo ay tahay arrin la yaab leh in markan ay jiraan in ka badan hal maqaal oo leh qaab ku saleysan waayo-aragnimada ka timid waddamada ku hadla Isbaanishka. 1. GvSIG. Mid ka mid ah qodobadan oo leh diiradda Hispanic ...
AutoDesk Bentley Systems Google Earth GvSIG OS majallado
AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, tabo cusub, Microstation-Bentley, topografia
Daabacaadda cusub ee 'Geoinformatics' mar hore ayaa la soo saaray, oo ku taariikhaysan Sebtember 2007 2008. Aynu si kooban u aragno dhowr mowduuc oo xiiso leh; In kasta oo aan kugula talinayo inaad aqriso nooca khadka tooska ah ee ka hadlaya oo ah 84 bog inay mudan tahay in la dheefshiido waqti, haddana iyagana waa loo soo dejisan karaa sida pdf in kasta oo culeyskiisu yahay 19 MB. Qaab-dhismeedka qaab dhismeedka dhulka ayaa ah ...
Geospatial - GIS, GPS / Qalabka, topografia
Bishan majaladda PC Magazine waxay la timid mowduuca kombiyuutarada cagaaran, aad u moodada ... waxay muujineysaa istiraatiijiyadaha cagaaran ee ay soosaarayaasha tikniyoolajiyaddu ku raadinayaan ilaalinta deegaanka. Waxaan ahaa aqriste iibsade joornaalkan tan iyo markii aan xasuusto, waxaan ku rafaaday isbedelka tifaftiraha inkasta oo aan horeyba ula qabsaday Nadia ...
Boggii hore Page 1 Page 2 Page 3 Page 4